I-Ovida yokuZenzekelayo evulekileyo yeAluminium Shaft Alu Handle Umbrella AC-ALU Stick Umbrella
Umbala wefayibha yeglasi yeyona nto inomtsalane. Kwaye isambrela sinobunzima bokukhanya njengoko senziwe kwimathiriyeli ye-fiberglass. Isibambo sitshatisa isikhumba se-PU nedayimani esenza ukuba isambrela sibe sodidi.
Into NO.: I-OV10019
Ukuhambisa iZibuko: XAMEN, FUJIAN
I-Ovida yokuZenzekelayo evulekileyo yeAluminium Shaft Alu Handle Umbrella AC-ALU Isambrela sokuncamathisela
I-Alu J yiphatho yobugwenxa Iambrela emthubi
Isakhiwo esingumoya se-fiberglass silingana nombala ophuzi wombala wesambulela esingenamanzi, isambrela etyheli, iimbambo zefayibha isambrela. Iimbambo zentsimbi.
Isambrela esimalunga namanzi se-nylon esomeleleyo, umbala opheleleyo weambrela ulungelelwaniso lweambrela.
UMSEBENZI OVULA NGOKUFANELEKILEYO: Cinezela nje iqhosha ukuvula! I-Smooth-Touch evulekileyo ivumela ulawulo, kunye nokuphathwa. Kulula ukusebenza ngesandla esinye, ngokukhawuleza, ngokuthembekileyo nangokufanelekileyo
IFreyimu eyomeleleyo ye-ULTRA: Ngelixa uninzi lweambrela zolu bungakanani zinesimbambo sentsimbi shaft wire ribs ezinokuqhekeka okanye ukugoba, le OVIDA isambrela ine-ultra aluminium shaft, ene-8 fiberglass ribs, evumela ukuba bhetyebhetye ngakumbi, kunye ifreyim yesinyithi emnyama. Ngale indibaniselwano ikhethekileyo yeAluminiyam, intsimbi, iglasi yefayibha, kunye nenickel, isambrela somelezelwa ngamandla aphezulu, kwaye iya kuqinisekisa ukuba isambrela asitshintshi ngaphakathi ngaphakathi kwimimoya yomoya enamandla
UMGANGATHO OBALULEKILEYO WELIDANGI LELIBANGO: Ilaphu lixinzelelekile ekugxotheni amanzi kwaye lome ngokukhawuleza, alizukufunxa amanzi. Vuthulula nje kamnandi emva kokuvala isambrela, emva koko onke amathontsi aya kuwa ngokulula
I-CLASSIC KUNYE NOKUYILA OKUFANELEKILEYO: Uyilo lwesiphatho esimilo segolide luhambelana ngokugqibeleleyo ezandleni zakho kwaye kulula ukuluqhuba. Xa ingasetyenziswanga, isingxobo sePongee esilinganayo sivalela isambrela ukugcina isambulela sihle kwaye sicocekile
UKHETHO OLUPHELELEYO: Le ambrela ye-aluminium yeklasikhi ngokuqinisekileyo yeyona ikhethekileyo! Yenzela isipho esihle abahlobo bakho kunye nosapho, kwaye uqinisekile ukuba ungaphezulu kokulindelweyo
Kufuneka uthumele umbuzo wakho kwidilesi ye-imeyile info@ovidaumbrella.com
Egqithileyo Isambrela se-Ovida isambulela sokwenza isambulela sokwazisa se-arc semvula
Okulandelayo: I-Ovida isiko elipheleleyo lombala osetiweyo-iseti yeambrela yokuprinta iambrela
Alu intonga isambrela
Iambrela engena kwisaqhwithi
Isambrela esingena moya
Ihowuliseyili 3vd Custom Custom Umbrella Foldi ...
19inch 8ribs Metal Shaft Manual Ukuvula Nge Ea ...
2.2m * 8ribs siko Ihowuliseyili yoshicilelo ilanga lixesha ...
23 intshi 16 iimbambo ubungakanani enkulu Luxury isambrela ngqo ...
Umbrella wemvula, Isambrela esisesikweni, Isambrela soKhuseleko oluNgenawo umoya, Iisambrela zesiko lesiqhelo, Isambrela esenzelwe wena, Ukusongelwa kwangaphandle,